Vaovao - Rafitra fanasitranana rano ho an'ny Tower Cooling
Ho an'ireo orinasa indostrialy mampiasa tilikambo fihenan-tsasatra ho an'ny toeram-ponenany, karazana rafi-pitsaboana rano fanamafisam-peo matetika no ilaina mba hahazoana antoka fa misy dingana mahomby sy fiainana serivisy maharitra. Raha avela tsy voatsabo ny rano tilikambo mangatsiaka dia mety hampihena ny famokarana zavamaniry ny fitomboan'ny biolojika, ny fanodikodinana, ny fanamafisana ary ny hakamoana, ary mitaky fanoloana fitaovana lafo vidy eny an-dàlana.
Ny rafi-pitsaboana rano mitsoka mangatsiaka dia rafitra teknolojia manala ny loto manimba amin'ny rano fisakafoanana tilikambo fihenan-tsakafo, rano mikoriana ary / na mitsoka. Ny fametrahana manokana ny rafitranao dia miankina amin'ny zavatra maro, ao anatin'izany:
•ny karazana tilikambo mangatsiaka (mivezivezy mivelatra, mandeha indray mandeha, na mihidy loop)
•kalitaon'ny rano fahana
•fepetra takiana amin'ny kalitaon'ny fanamboarana ho an'ny tilikambo sy fitaovana fampangatsiahana
•simia / makiazy amin'ny rano mikoriana
•fepetra takian'ny lalàna amin'ny famoahana azy
•na hitsofana na tsia dia hokarohina hampiasaina indray ao amin'ny tilikambo mangatsiaka
•karazana mpanova hafanana
Araka ny efa voalaza tetsy ambony, ny tena singa ao amin'ny rafitra fikarakarana rano tilikambo mangatsiaka dia miankina amin'ny kalitaon'ny rano fahana sy ny simia amin'ny rano mikoriana mifandraika amin'ny kalitaon'ny rano ilaina amin'ny tilikambo fanamoriana manokana sy ireo fitaovana mifandraika amin'izany. (araky ny tolo-kevitr'ireo mpanamboatra azy), fa amin'ny ankapobeny, ny rafi-pitsaboana rano fanamafisam-peo fototra dia misy karazana:
•filtration sy / na filtration ultra-filtration
•fifanakalozana ion / fanalefahana
•fanaraha-maso mandeha ho azy
Miankina amin'ny fahalotoana misy ao anaty rano, ny fampifangaroana ireo fitsaboana ireo dia mety mifanaraka amin'ny toerana misy azy sy mamorona ny rafitra fitsaboana, noho izany dia zava-dehibe ny manatona ny manam-pahaizana manokana momba ny fitsaboana rano mba hahazoana antoka fa dinihina ny rafitra mety amin'ny tilikambo manokana. Miankina amin'ny filan'ny tilikambo sy ny fizotran'ny fizotrany, ireo singa mahazatra ireo dia matetika no ampy. Na izany aza, raha mila rafitra manome tolo-kevitra somary bebe kokoa ny tilikambo, dia mety misy fampiasa na haitao mila ampiana.
Ny rafitra fitsaboana rano tilikambo mangatsiaka dia mety ho an'ny teknolojia ilaina mba hifehezana ny haavon'ny:
•alkalinity: hibaiko ny mety ho ambaratonga kalsiôma karbonika
•chlorides: mety hanimba ny metaly; ambaratonga samihafa dia hilefitra mifototra amin'ny akora fanamafisam-peo tilikambo sy fitaovana
•hamafisana: mandray anjara amin'ny ambaratonga amin'ny tilikambo fihenan-tsasatra sy amin'ny fifanakalozana hafanana
•vy: rehefa ampiarahina amin'ny phosphate dia afaka mandoto fitaovana ny vy
•zavatra biolojika: mampiroborobo ny fitomboan'ny zavamiaina bitika, izay mety hiteraka tsy fahombiazan'ny fo, fahasimbana ary olana amin'ny rafitra hafa
•silica: fantatra amin'ny antony miteraka fametrahana vola mizana 硬 水垢
•solifara: toy ny klôroôde, dia mety hanimba ny metaly
•solida tanteraka (TDS): anjara amin'ny scaling, foaming, ary / na harafesina
•totaly mihantona (TSS): loto tsy voarindra izay mety hiteraka scaling, horonan-tsary, ary / na harafesina
Ny fizotran'ny fitsaboana manokana dia miovaova arakaraka ny fepetra takian'ny tilikambo fihenan-tsasatra sy ny kalitao / simia amin'ny rano fahanana sy ny fivezivezena, fa ny rafi-pitsaboana rano mahazatra kosa dia ahitana ireto dingana manaraka ireto:
Fampiasana rano makiazy tilikambo mihena
Ny rano makiazy, na ny rano manolo ny rà mandriaka sy etona ary tafaporitsaka avy ao amin'ny tilikambo fihenan-tsakafo, dia nalaina voalohany avy tamin'ny loharano niavian'ny rano, rano tao an-tanàna, lakandrano notsaboina tao an-tanàna, fanodinana rano maloto ao anaty zavamaniry, rano fantsakana, na loharano hafa ambonin'ny rano.
Miankina amin'ny kalitaon'ity rano ity dia mety mila fitsaboana eto ianao na tsia. Raha misy rafitra fitsaboana rano amin'ity faritra ity amin'ny fizotran'ny rano amin'ny tilikambo mangatsiaka, matetika ny teknolojia no manala ny hamafin'ny sy silica na mampiorina sy manitsy ny PH.
Amin'io fotoana io, ny fitsaboana sahaza dia manatsara ny tsingerin'ny etona amin'ny tilikambo ary mampihena ny tahan'ny rà mandriaka ao anaty rano mihoatra ny zavatra mety hatao amin'ny simika fotsiny.
Filtration sy ultra-filtration
Ny dingana manaraka amin'ny ankapobeny dia ny fampandehanana ny ranon'ny tilikambo mangatsiaka amin'ny alàlan'ny karazana filtration mba hanesorana ireo poti-piatoana miantona toy ny sediment, turbidity ary karazana karazan-javamaniry sasany. Ilaina matetika ny manao an'io eo am-piandohana, satria ny fanesorana ireo solo-javatra mihantona mankany ambony dia afaka manampy amin'ny fiarovana ny fonontselan-keloka sy ny resina fifanakalozana ion tsy ho simba intsony aorian'izay. Miankina amin'ny karazana filtration ampiasaina, ny poti-piatoana mihantona dia azo esorina ambany mikrô iray.
Fifanakalozana ion / fanalefahana rano
Raha misy hamafin'ny rano loharano / makiazy dia mety misy ny fitsaboana ny fanesorana ny hamafiny. Raha tokony ho sokay dia resina manalefaka no azo ampiasaina; dingana fifanakalozana asidra mahery, izay ampiasana ny resina amin'ny ion natôma, ary rehefa mivoaka ny hamafiny, dia manana fiakarana ambony kokoa ho an'ny kalsioma, manezioma ary vy izy io, ary haka izany molekiola izany ary hamoaka ny molekiola sodium ao anaty rano. Ireo fandotoana ireo, raha misy, dia hiteraka fatiantoka sy harafesina.
Amin'io fotoana io dia misy ny fampiasana akora simika, toy ny:
•mpanakan-tsiranana (oh: bicarbonates) handrava ny asidra ary hiarovana ireo singa vy
•algaecides sy biocide (oh: bromine) hampihenana ny fitomboan'ny mikraoba sy biofilm
•mpanelingelina amin'ny ambaratonga (oh: asidra phosoratika) hisorohana ny loto tsy hamorona tahiry arakaraka
Ny fitsaboana tanteraka alohan'ity dingana ity dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny habetsaky ny zavatra simika ilaina amin'ny fitsaboana rano amin'izao fotoana izao, izay mety indrindra raha jerena fa mety lafo ny fitsaboana simika maro.
Fanivanana amin'ny sisiny
Raha toa hivezivezy manerana ny rafitra ny rano misy tilikambo mangatsiaka dia hanampy amin'ny fanesorana ireo loto misy olana izay niditra tamin'ny alàlan'ny fandotoana, famoahana, sns. ny rafi-pitsaboana rano mitsoka mangatsiaka dia mitaky fanivanana amoron-drano, manodidina ny 10% ny rano mikoriana no hanivana. Matetika izy io dia misy unite filtration multimédia tsara kalitao.
Ny tapany farany amin'ny fitsaboana ilaina amin'ny rano mangatsiaka dia ny fikororohana na ny rà avy amin'ny tilikambo.
Miankina amin'ny habetsaky ny rano mila hiparitahan'ny zavamaniry mangatsiaka ny fahaizany mangatsiaka araka ny tokony ho izy, ny zavamaniry dia hisafidy ny hamerina sy hamerina ny rano amin'ny alàlan'ny karazana fitsaboana aorian'ny fitsaboana osmosis na ion exchange, indrindra amin'ny toerana mety tsy fahampian'ny rano. Io dia mamela ny fako misy ranoka sy matevina mifantoka ary esorina raha azo averina amin'ny tilikambo kosa ny rano voadio ary ampiasaina indray.
Raha mila mivoaka ny rano avy amin'ny fipoahana dia mila mahafeno ny fepetra takiana amin'ny lalàna ny fivoahana rehetra izay noforonin'ny rafitra. Amin'ny faritra sasany izay tsy fisian'ny rano dia mety misy ny saram-pifaneraserana anaty tatatra lehibe ary ny rafitra fanalefahana demaeraly dia mety ho vahaolana mahomby eto satria afaka manampy amin'ny fampihenana ny vidiny izy ireo raha mampifandray amin'ny tsipika rano sy tatatra. Ary koa, ny fandefasana ny tilikambo fihenan'ny rà dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fitsipiky ny fanapahana kaomininaly ao an-toerana raha averina amin'ny tontolo iainana na ny asa fitsaboana ampahibemaso ny effluent.
Ny tilikambo fanamafisana indostrialy dia mpanjifa be rano. Amin'ny tsy fahampian'ny rano amin'ny faritra sasany eto amin'izao tontolo izao, ny fitsaboana rano mahomby izay mamela ny fitomboan'ny fampiasana rano indray dia antony iray mitarika ny fotoana sy ny toerana hampiasana tilikambo mangatsiaka. Ho fanampin'izany, ny fepetra fivoahan'ny rano federaly, fanjakana ary munisipaly henjana dia handrisika fomba vaovao kokoa mifandraika amin'ny fitsaboana rano mangatsiaka amin'ny tilikambo.
Ny rafi-pamangatahana mihidy izay manena ny fidiran'ny rano mihoatra ny 90,0% raha oharina amin'ireo rafitra fampangatsiahana efa misy ao amin'ny indostrian'ny simika sy ny toby famokarana hafanana. Noho izany dia mitarika fitomboan'ny fangatahana rafitra circuit mihidy ho an'ny fizotran'ny fanamafisana manerantany.